1. के तपाइँ उत्पादनहरूमा मेरो अद्वितीय लोगो वा नाम राख्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी तपाईंको लोगो वा नाम उत्पादनहरूमा राख्न सक्छौं, या त कढाई वा स्क्रिन प्रिन्टिङद्वारा। केवल हामीलाई लोगो वा नाम इमेल गर्नुहोस्, हामी लागत उद्धृत गर्नेछौं र तपाईंको समीक्षाको लागि नमूना बनाउनेछौं।
2. के म नमूनाहरू प्राप्त गर्न सक्छु?
हामी तपाईंको समीक्षाको लागि नमूनाहरू पठाउन खुसी छौं। हाम्रो नमूना नीति यो हो कि हामी नि: शुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्दछौं र हाम्रा ग्राहकहरूले कुरियर लागत तिर्छन्। किनकि हामी हरेक दिन धेरै नमूना अनुरोधहरू प्राप्त गर्छौं, हामीलाई सबै ढुवानी लागतहरू वहन गर्न गाह्रो छ। तर यदि तपाईंलाई तुरुन्तै नमूनाहरू आवश्यक पर्दैन भने, हामी हाम्रो खर्चमा हावा मेलबाट पठाउन सक्छौं। दीर्घकालीन व्यापारको लागि, हामी हाम्रो खर्चमा सबै नमूनाहरू प्रदान गर्दछौं।
यो उच्च संतृप्ति को फोटोहरु द्वारा नमूना अनुमोदन गर्न को लागी एक धेरै व्यावहारिक तरीका पनि छ, यो छिटो र सुविधाजनक छ।
वा न्यूनतम अर्डर मात्राको लोगोको साथ पहिलो पटक व्यापार र उत्पादनहरू, हाम्रो भुक्तानी अवधि उत्पादन र ढुवानी अघि पूर्ण भुक्तानी हो। न्यूनतम अर्डर मात्रा भन्दा बढी अर्डरहरूको लागि, भुक्तानी अवधि उत्पादन अघि आधा डाउन पेमेन्ट र आधा ढुवानी अघि वा बिल अफ लडिङ्गको फ्याक्सिंगमा हुन्छ। लामो अवधिको नियमित व्यापार र ठूलो मात्राको अर्डरको लागि, हामी क्रेडिटको पत्र र अन्य भुक्तानी विधिहरू दुवै सहमत भएका भुक्तानीहरू स्वीकार गर्छौं।
4. तपाईको न्यूनतम अर्डर मात्रा के हो?
तपाईले कुन उत्पादनहरू अर्डर गर्नुहुन्छ र उत्पादनहरूको जटिलतामा निर्भर गर्दछ। कृपया हामीलाई न्यूनतम मात्राको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
5. के तपाइँ ग्राहकहरु को लागी उत्पादनहरु लाई अनुकूलित गर्नुहुन्छ?
हो, हामी रङ, साइज, स्टाइल, लोगो इत्यादि लगायतका उत्पादनहरू आफू अनुकूल बनाउँछौं। र हामी तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार नयाँ उत्पादनहरू सुधार गर्न र डिजाइन गर्न पनि सक्षम छौं।
6.कसरी अर्डर गर्ने?
अर्डर राख्नको लागि, हामीलाई इमेल वा फोन कल द्वारा आवश्यक वस्तु र मात्रा बताउनुहोस्, हामी तदनुसार मूल्यहरू उद्धृत गर्नेछौं। एकचोटि मूल्यहरू पुष्टि भएपछि, हामी तपाईंलाई प्रो-फॉर्मा इनभ्वाइस र बैंक जानकारी पठाउनेछौं, र डेलिभरी मिति अनुमान गर्नेछौं, एकै समयमा, तपाईंको स्वीकृतिको लागि उत्पादन नमूना बनाउनुहोस्, उत्पादन व्यवस्था र सामान ढुवानी पछि।
7. हामी के जानकारी प्रस्ताव गर्न सक्छौं?
हामीसँग व्यावसायिक अनुसन्धान टोली र अनुभव थियो, जसले विवरण उत्पादन जानकारी वा समस्या दिन सक्षम छ। हामीसँग व्यावसायिक बिक्री टोली थियो, जसले कुन शैली लोकप्रिय हुनेछ, तातो बिक्री, अन्य ग्राहक डिजाइन (तर केवल सन्दर्भको लागि) प्रदान गर्न सक्षम थियो।
8. हामी के जानकारी प्रस्ताव गर्न सक्छौं?
9. के तपाइँसँग कुनै ठूलो वा प्रसिद्ध ग्राहक छ?
वर्तमानमा, हाम्रो ब्रान्ड ग्राहकहरू समावेश छन्: कोका कोला, वालमार्ट, डिज्नी, माइक्रोसफ्ट, लेनोभो, ACER, DII, मिलर, रक स्टार्ट, हेनेकेन, बेन्ज, हामीले सहयोग गर्ने ठूलो संख्यामा ग्राहक!